ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသော သတင်းစကား | The Rejected Report | Real Conversion
၂၀၁၃၊ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃ရက်၊
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသော ဒေသနာတော်၊
“ငါတို့ဟောပြောသော သတင်းစကားကို အဘယ်သူယုံသနည်း။ ထာ၀ရဘုရား၏ လက်တော်သည် အဘယ်သူအား ထင်ရှားတော်မူ သနည်း။” (ဟေရှာယ ၅၃း၁)
ဟေရှာယသည် ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ဟောကြားနေ ပါသည်။ လွန်ခဲ့သောအပတ်က ဟေရှာယအခန်းကြီး ၅၂ ၏နောက်ဆုံးသော ကျမ်းပိုဒ်ကို ကျွန်ုပ်ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ ပရောဖတ်ကြီးက ခရစ်တော်၏ နာကျင်ခြင်းဝေဒနာအကြောင်း ကြိုတင်ဟောထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ “သူသည် လူမဟုတ်သကဲ့သို့ မျက်နှာပျက်ခြင်း၊ လူသားမဟုတ်သကဲ့သို့ အဆင်းအသရေပျကဲ်ခြင်းရှိသည်ကို အများသောသူတို့သည် အံ့ဩမိန်းမောကြ သည်ဖြစ်၍” (ဟောရှာယ ၅၂း၁၄)ဟု ရေးသားဖေါ်ပြထားပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကားတိုင်ပေါ်ယေရှုရိုက်နှိပ်ခြင်း၊ သရော်ပြောင်လှောင်ခြင်း၊ ခံရမည့်ပုံရိပ်ပင်ဖြစ်သည်။ “ချီးမြှင့်ခြင်းသို့ရောက်၍ အထိဋ်အမြတ်ဖြစ်လိမ့်မည်” (ဟေရှာယ ၅၂း၁၃)ဟုရေးသားဖေါ်ပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွှေကျမ်းချက်၌ ပရောဖတ်ကြီးက ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို လူအနည်းစုက ယုံကြည်ကြမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဒေါက်တာ အီးဝပ်ဒ်.ဂျေ.ယန်းသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတတ် ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ လက်ဦးသင်းအုပ်ဆရာ၏ အတန်းဖော်နှင့် သူငယ် ချင်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွှေကျမ်းချက်ကို မှတ်ချက်ပေးပြော ကြားခဲ့သည်။
“ငါတို့ဟောပြောသော သတင်းစကားကို အဘယ်သူယုံသနည်း ထာ၀ရဘုရား၏လက်တော်တော်သည် အဘယ်သူအား ထင်ရှားတော်မူသနည်း၊”
ဒေါက်တာယန်းပြောကြားခဲ့သည်မှာ “၎င်းကျမ်းပိုဒ်သည် မေးခွန်းသင်္ကေတထက် အမေဋိတ်သင်္ကေတအမှတ် အသားဖြစ်သင့်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားကို တောင်းဆိုနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ (အနည်းငယ်သော) စစ်မှန်သောယုံကြည်သူတို့အား ဖိတ်ခေါ်နေခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ပရောဖက်(သည်) မိမိလူတို့၏ကိုးစားလှယ်ဖြစ်သဖြင့် လူအနည်းငယ်မျှသာ ယုံကြည်ကြည်သည်ကို ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်သည် (Edward J. Young., Ph.D. The Book of Isaiah, William B. Eerdmans Publishing Company, 1972, volume 3, p. 240).
“ငါတို့ဟေပြောသောသတင်းစကားကို အဘယ်သူယုံသနည်း၊ ထာ၀ရဘုရား၏ လက်တော်သည် အဘယ်သူအား ထင်ရှားတော်မူသနည်း၊”
“အစီရင်ခံခြင်း”၏အနက်ကား “သတင်းစကားကို ကြော်ငြာခြင်း”ဟူ၍မည်၏။ လုသာအနက်ပြန်ဆိုသည်မှာ “ကျွုန်ုပ်တို့ဟောကြားခြင်းကို ယုံကြည်သူခြင်း”ဟူ၍ဖြစ်၏။ “ငါတို့ဟောပြောသော သတင်းစကားကို အဘယ်သူယုံသနည်း။”ထာ၀ရဘုရား၏လက် ရုံးတော်ကို ဖေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ “အကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသော သတင်းစကားကို အဘယ်သူယုံသနည်း” ထာ၀ရဘုရား၏လက်တော်သည် အဘယ်သူအား ထင်ရှား သနည်း၊ ခရစ်တော်ဘုရား၏ ကယ်တင်ခြင်းတန်ခိုးသည် အဘယ်သူ ထင်ရှားသနည်း၊
“ငါတို့ဟောပြောသောသတင်းစကားကို ဘယ်သူယုံသနည်း၊ ထာ၀ရဘုရား၏လက်တော် သည်အဘယ်သူအား ထင်ရှားတော်မူသနည်း” (ဟေရှယ ၅၃း၁)။
၎င်းကျမ်းပိုဒ်၌ဖေါ်ပြသည်မှာ ဦးစွာသင်သည် ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကို ကြားနာရမည်ဖြစ်ပြီး ထို့နောက် ခရစ်တော်၌ ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပရောဖက်ကြီး၏ မေးခွန်းတွင် လူအနည်းငယ်တို့သာ ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည်ဟု ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
“ငါတို့ ဟောပြောသောသတင်းစကားကို အဘယ်သူယုံသနည်း၊ ထာ၀ရဘုရား၏ လက်တော်သည် အဘယ်သူအား ထင်ရှားတော်မူသနည်း၊ (ဟေရှာယ ၅၃း၁)။
၁။	ပထမ၊ ဤလောက၌ ခရစ်တော်၏ သက်ရှိထင်ရှားစဉ်တွင် အနည်းငယ်သာ ယုံကြည်င်္ပြီး အသက်တာပြောင်းလဲခဲ့ကြပါသည်။
ယေရှုသည် လာဇရု၏ သချိုင်းသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ သူသည် သေဆုံးသွားသည်မှာ လေးရက်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ယေရှုက “ကျောက်ကို ရွေ့ကြဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်” (ယောဟန် ၁၁း၃၉)။ လာဇရု၏ ညီမက ထိုသို့မပြုလုပ်ရန် တားဆီးခဲ့ သည်။ သူက “သခင် ယခုဖြစ်လျှင် နံလိမ့်မည်။ လေးရက်ရှိပါပြီဟု လျှောက်၏” (ငဘငိ) လူတို့သည် ယေရှု၏ အမိန့်ကိုနာခံကြလျှက် သင်္ချိုင်းကိုပိတ်ထားသောကျေက်တုံးအား ရွှေ့ခဲ့ကြပြီးလျှင် လာဇရုထွက်လော့ဟု ကြီးစွာသောအသံနှင့် ဟစ်ခေါ်တော်မူ၏။ ထိုအခါ သေလွန်သောသူသည် မိမိခြေလက်ကို ပုဆိုးနံငယ်နှင့် ရစ်ပတ်လျှက် မျက်နှာကိုလည်း ပုဝါနှင့်စည်းလျှက် ထွက်လာ၏။ ယေရှုကလည်း သူ့ကိုဖြေ၍ လွှတ်ကြလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏” (ယောဟန် ၁၁း၄၃-၄၄)။
“ထိုအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် ဖါရိရှဲများသည် လွှတ်အရာရှိတို့ကို စည်းဝေးစေပြီးလျှင် ငါတို့ အဘယ်သို့ပြုမည်နည်း။ ထိုသူသည် များစွာသော နိမိတ်လက္ခဏာကို ပြ၏။” (ယောဟန် ၁၁း၄၇)။
သူတို့သည် များစွာသောနိမိတ်လက္ခဏာကို မြင်ခဲ့ကြသောအခါ ယေရှုနောက် တော်သို့ လိုက်ကြရမည့်အစား သာမန်လူတို့နည်းတူ ကြောက်ရွံ့ခဲ့ကြသည်။
“ထိုန့မှစ၍ ကိုယ်တော်၏အသက်ကိုသတ်ခြင်းငှါ တိုင်ပင်ကြံစည်ကြ၏” (ယောဟန် ၁၁း၅၃)။
ဖာရိရှဲနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် သခင်ယေရှုကို “အသေခံခြင်း” ဖြစ်သော အသွေးတော်လမ်းကို စုဝေးသတ်မှတ်ကြသည်။ တမန်တော်ရှင်ယောဟန်ပြောပြသည်မှာ
“ထိုမျှလောက်ကြီးစွာသော နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို သူတို့မျက်မှောက်၌ ပြတော်မူသော်လည်း သူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းသို့မရောက်ကြ။ ပရောဖက် ဟေရှယ ဟောဖူးသည်ကား၊ ထာ၀ရဘုရား အကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသော သတင်းစကားကို ဘယ်သူ ယုံပါသနည်း။ ထာ၀ရဘုရား၏လက်တော်သည် ဘယ်သူအားထင်ရှားတော်မူသနည်း။ ဟူသောစကားသည် ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်သတည်း”။ (ရှင်ယောဟန် ၁၂း၃၇-၃၈)
ငါးထောင်ချီသော လူများ၏နိမိတ်လက္ခဏာများကို လူအများတို့ မြင်ခဲ့ကြသည်။ ခြေမသန်စွမ်းသူများနှင့် မျက်စိကန်းသူများတို့၏ ကုသခြင်းကိုလည်း တွေ့မြင်ခဲ့ ကြသည်။ နတ်ဆိုးများနှင့်မသန်စွမ်းသူများကို ထိရောက်အောင်မြင်သော လုပ်ရပ်များ တွေ့မြင်ခဲ့ကြသည်။ သေခြင်းတံခါးပေါက်မှ ထမြောက်ခဲ့သောလုပ်ရပ်များကိုလည်း မြင်တွေ့ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ သတင်းကောင်းကြားရုံသာမက ရေမှဝိုင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပုံကိုလည်း တွေ့မြင်ခဲ့ကြသည်။
“ယေရှုသည် တရားဇရပ်တို့၌ ဆုံးမဩဝါဒပေးလျှက် နိုင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်၊ လူများခံရသော အနာရောဂါအမျိုးမျိုး တို့ကိုငြိမ်းစေလျက် မြို့ရွာရှိသမျှတို့ကို ဒေသစာရီလှည့်လည်တော်မူ၏။ လူအစုအဝေးတို့ကို မြင်တော်မူလျှင် သနားခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏။” (ရှင်မဿဲ ၉း၃၅)
လာဇရုသေခြင်းမှ ထမြောက်စေသော်လည်း “ကိုယ်တော်၏အသက်ကို သတ်ခြင်းငှါ တိုင်ပင်ကြံစည်ကြ၏” (ယောဟန် ၁၁း၅၃)။
“ထိုမျှလောက် ကြီးစွာသော နမိတ်လက္ခဏာတို့ကို သူတို့မျက်မှောက်၌ ပြတော်မူသော်လည်း သူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းသို့မရောက်ကြ။ ပရောဖက် ဟေရှာယ ဟောဖူးသည်ကား အိုထာ၀ရဘုရား အကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသော သတင်းစကားကို ဘယ်သူယုံပါသနည်း။ ထာ၀ရဘုရား၏လက်တော်သည် ဘယ်သူအား ထင်ရှားတော်မူသနည်း။ ဟူသောစကား ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်သတည်း”။ (ယောဟန် ၁၂း၃၇-၃၈)
မှန်ပါသည်။ အနည်းစုသောလူများသာလျှင် လောကရှိစဉ် သခင်ယေရှုသာသနာ ပြုခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်ပြီးပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။
၂။	ဒုတိယ၊ တမန်တော်များ၏ အချိန်အခါတွင် အနည်းငယ်သာ ယုံကြည်ပြောင်းလဲ ခဲ့ကြသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ရောမ ၁ဝး၁၁-၁၆ကို ဖွင့်ထားပါ။ အားလုံးမတ်တတ်ရပ်၍ ကျမ်းပိုဒ်ကိုဖတ်ကြပါစို့။
“ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းငှါ နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏။ ကျမ်းစာလာသည်ကား ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရဟု လာသတည်း။ ယုဒအမျိုး၊ ဟေလသအမျိုးကိုမရွေး၊ လူအပေါင်းတို့ကို အစိုးရသောအရှင်တပါးတည်းရှိ၍ ကိုယ်တော်ကို ပဌနာ ပြုသော သူအပေါင်းတို့၌ ကျေးဇူးရူအးကယ်၀တော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား ထာ၀ရ ဘုရားကို ပဌနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရကြလတ္တံ။ သို့ရာတွင် မယုံကြည်လျှင် အဘယ်သို့သာသနာပြုနိုင်မည်နည်း။ သတင်းမကြား လျှင် အဘယ်သို့ယုံကြည်နိုင်မည်နည်း။ ဟောပြောသောသူမရှိလျှင် အဘယ်သို့ ကြားနိုင်မည်နည်း။ လူကိုမစေလွှတ်လျှင် အဘယ်သို့ဟောပြောနိုင်မည်နည်း။ ထိုသို့နှင့်အညီ ကျမ်းစာလာသည်ကား ငြိမ်သက်ခြင်း၏ ဝမ်းမြောက်စရာ သတင်းကောင်းကျိူးချမ်းသာ၏ ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကို ကြားပြောသောသူ၏ ခြေတို့သည် အလွန်တင့်တယ်စွာတကားဟု လာသတည်း။ သို့သော်လည်း လူအပေါင်းတို့သည် ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကောင်းကို နားထောင်ကြသည် မဟုတ်။ ပရောဖက်ဟေရှာယစကားဟူမူကား အိုထာ၀ရဘုရား အကျွန်ုပ်တို့ ဟောပြောသောသတင်းစကားကို အဘယ်သူယုံပါသနည်းဟုဆို၏” (ရောမ ၁ဝး၁၁-၁၆)
အပိုဒ်ငယ် ၁၂တွင် ကျမ်းစာအဓိက ဖေါ်ပြသည်မှာ
“ယုဒအမျိုး၊ ဟေလသအမျိုးကို မရွေး၊ လူအပေါင်းတို့ကို အစိုးရသော အရှင်တစ်ပါးတည်းရှိ၍ ကိုယ်တော်ကို ပဌနာပြုသောသူအပေါင်းတို့၌ ကျေးဇူးကြွယ်၀တော်မူ၏” (ရောမ ၁ဝး၁၂)
ကျမ်းပိုဒ်သည် တမန်တော်ရှင်ပေါလု ရေးသားသောကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ယေရှုခရစ်တော် ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ရူအးကတော်မူပြီးနောက် အနှစ်သုံးဆယ်မျှ သာတွင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရှင်ပေါလုသည် တမန်တော် ဇတ္တုနှင့် ရောမဩဝါဒစာများ ရေးသားခဲ့သည်။ ခရစ်တော်ဟောပြောဝေငှသော ဒေသနာများသည် ယုဒများကို အခြေခံသော်လည်း ရှင်ပေါလုသည် တပါးအမျိုး သားများနှင့် ဂျူးလူမျိုး နှစ်မျိုးစလုံးကို ဟောပြောသည်။ ရှင်ပေါလုပြောသည်မှာ ဟေလသလူ၊ ယုဒလူမရွေး၊ လူတိုင်း ခရစ်တော်လိုအပ်သည်။
ရှင်ပေါလု၏ ရှင်းလင်းချက်မှာ တပါးအမျိုးသားများဖြစ်၍ (ဟေရှာရ ၅၃း၁)တွင် သခင်ယေရှု၏ မိန့်တော်မူချက်နှင့် ရှင်ပေါလု၏ ဆိုလိုရင်းသည် တူညီသည်။ အထူးသဖြင့် တပါးအမျိုးသားများနှင့် ယုံကြည်မှုကိုခိုင်းနှိုင်းလျှင် ဂျူးလူမျိုးများ ထက် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုသာ တပါးအမျိုးသားများသည် အလေးထား ကြပါသည်။ ဟေရှာယ၏ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းမှုမှ ရှင်ပေါလု၏ ကောက်ချက်မှာ
ဂျူးလူမျိုးများထက် တပါးအမျိုးသားများသည် သတင်းကောင်းကို ဝေငှသည်။ ရှင်ပေါလုနှင့် အခြားသောတမန်တော်များ၏ ဟောပြောချိန်၌ အနည်းငယ်လောက်သော တပါးအမျိုးသားများ ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ တမန်တော်ဝတ္ထုတွင် ထူးဆန်းသော နိုးထမှုများ မြင်တွေ့နိုင်သကဲ့သို့ ရေတွက်ရလောက်သော တပါးအမျိုးသားများသည် ခရစ်တော်၏ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်။ ရောမတွင် ဧဝံဂေလိဝေငှရန် ခက်ခဲမှု ရှိသည်။
အနည်းငယ်မျှသာ ပြောင်းလဲခြင်းကို တမန်တော်များ၌ ခရစ်တော်သည်သာလျှင် တွေ့မြင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ပထမ ခရစ်တော်သမိုင်းရာစုတွင် အနည်းငယ်စုသော လူစုများ ကန့်သတ်ထားကြသည်။ ပြီးနောက်တွင် ရှင်ပေါလုနှင့် ရှင်ယောဟန်သည် ဧဝံဂေလိသတင်းများကို လူအများအား ရှင်းလင်းဟောပြောမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ဤအချက်များသည် ခရစ်ယာန်သမိုင်းများကို သက်ဝင်မှန်ကန်စေသည်။ အမြဲတမ်းလိုလို အနည်းစုသောလူများသည် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်၍ စစ်မှန်သော ပြောင်းလဲခြင်းများ ရရှိခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည် ယနေ့ထိတိုင် ကမ္ဘာ၌ မှန်ကန်သောအရာ ဖြစ်သည်။ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါ။ သတင်းကောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။
၃။	တတိယ၊ ယနေ့ခေတ်တွင် အနည်းစုယုံကြည်၍ အသက်တာ ပြောင်းလဲသည်။
ဟေရှာရ၏ ဝမ်းနည်းဖွယ်မေးခွန်းများတွင် ကိုယ်ပိုင်အချိန်၌ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း ရမည်။
ရေူအးကကွဲသည့်နှလုံးသားဖြင့် ယနေ့ အနည်းငယ်သောလူမျိုးများဆီသို့ သတင်း ကောင်း ဝေငှခြင်းနှင့် ခရစ်တော်၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း အကြောင်းကို ဝေငှရမည်။ အချစ်ရဆုံးသောဆွေမျိုးများသည် ခရစ်တော်ကိုငြင်းပယ်ရင်တောင် သတင်းကောင်း ဝေငှရမည်။ သင်သိသော လူမျိုးစုများသည် ဘုရားကျောင်းသို့ ခေါ်ဆောင်ပြီး သတင်းကောင်းကို လက်ခံကာ အသက်တာပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအပေါ်၌ ကျွန်ုပ် အချက်သုံးချက်ဖြင့် ရည်ညွှန်းတင်ပြလိုပါသည်။
(၁) ပထမ ၊ သမ္မာကျမ်းစာဖေါ်ပြသော ကယ်တင်ခြင်းကို မည်သို့ရရှိမည်နည်း။ ၎င်းသည် မမှန်ကန်ပါ။ အထူးသဖြင့် ယေရှုပြောလိုသည်မှာ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်သည်။ မိန့်တော်မူသည်ကား -
“မိမိတို့အဆက်ဆက်ခံသော နည်းဥပဒေသအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ နုတ်ကပတ်တော်ကို ပယ်ကြ၏။ ထိုသို့သော အကျင့်ဓလေ့များတို့ကို သင်တို့သည် ကျင့်လေ့ရှိကြသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ လူအစုအဝေး အပေါင်းတို့အထံသို့ခေါ်၍ သင်တို့ရှိသမျှသည် နားထောင်နားလည်ကြလော့” (ရှင်မဿဲ ၇း၁၃-၁၄)။
၎င်းကို အနည်းစုများ၌သာ တွေ့ခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် သတင်းကောင်းအတွက် ကြိုးစားအားထုတ်သောအချိန်၌ ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့် ခြင်းများထက် အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းကိုသာအားထုတ်ရန် နှလုံးသားထဲ၌ အမြဲတမ်းသတိပြုရမည်။ ပြီးနောက် ဒုတိယအချက် ကျွန်တော်ပြောပြ လိုသည်မှာ
(၂) ကျွန်တော်တို့၏ သတင်းကောင်းလုပ်ငန်းသည် လူဘယ်လောက် အသက်တာ ပြောင်းလဲမည်ကို အခြေခံမည်မဟုတ်ပါ။ သတင်းကောင်း၏ တုန့်ပြန်မှု များဖြစ်သော အများစုအနည်းစုသာမက ကျွန်တော်တို့ ဦးတည်ချက်သည် လူဘယ်လောက် အသက်တာပြောင်းလဲရမည်ကို အခြေမခံပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ ဦးတည်ချက်များသည် ဘုရားသခင်၏စကားကို နားထောင်ခြင်းအပေါ် မူတည်ရမည်။ ကျွန်တော် ဧဝံဂေလိဝေငှသောအခါ၌ ဘုရားကိုသာ အာရုံစိုက်၍ ဘုရားစကားကို နာခံခြင်းသာ အမြဲတမ်းပြုရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဦးတည်ချက်သည် ဘုရားသခင်အပေါ်ဖြစ်ပြီး နာခံမှုသည် ခရစ်တော်၌ဖြစ်ရမည်ဟူသော ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းကောင်းဝေငှသက်သေခံ ခြင်းဖြစ်ရမည်။ ခရစ်တော်ပြောသည်မှာ-
“သင်တို့သည် လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ် ရှိသမျှသို့သွား၍ ဝေနေယျသတ္တဝါ အပေါင်းတို့ ဧဝံဂေလိတရားဟောကြလော့” (မာကု ၁၆း၁၅)
၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ခရစ်တော်ဟောပြောသောအရာဖြစ်သည်။ လူအများ နားထောင်သည်ဖြစ်စေ၊ မနားထောင်သည်ဖြစ်စေ၊ ပြောင်းလဲသည်ဖြစ်စေ၊ မပြောင်းလဲသည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်ရမည်။ ခရစ်တော်ပြောသော အရာများကို ကျွန်ုပ်တို့ သတင်းကောင်းဝေငှရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အောင်မြင်ခြင်းသည် လူသားများ၏ တုန့်ပြန်မှုအပေါ်၌ မမူတည်ပါဍ မဟုတ်ပါဍ ကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်ခြင်းသည် ခရစ်တော်အပေါ် နာခံခြင်း၌ သာမူတည်သည်။ ထို့ကြောင့် သတင်းကောင်းကို ယုံသည်ဖြစ်စေ၊ မယုံသည်ဖြစ်စေ၊ ဝေငှရမည်။ ပြီးနောက် တတိယအချက်အနေနှင့် ပြောပြလိုသည်မှာ
(၃) ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သလား၊ ခရစ်တော်၌ အသက်တာပြောင်းလဲသလား၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်ထံသို့ ချဉ်းကပ်လိုပါသလား အကယ်၍ သင့်မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများ အသက်တာမပြောင်းလဲခဲ့ရင်တောင် ခရစ်တော်ကို ရှာဖွေမလား။ ခရစ်တော်ထံချဉ်းကပ်မလား။ ခရစ်တော် မိန့်တော်မူချက်များကို သတိရပါ။
“ယုံကြည်၍ ဗတ္တိဇံကို ခံသောသူသည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်လတံ့။ မယုံကြည်သောသူမူကား အပြစ်စီရင်ခြင်းသို့ ရောက်ရလတံ့။ (မာကု ၁၆း၁၆)။
ခရစ်တော်ထံသို့ ချဉ်းကပ်ကာ အသက်တာပြောင်းလဲ၍ ရေနှစ်ခြင်းခံယူမလား (သို့မဟုတ်) များစွာသောအသက်တာဖြင့် ကယ်တင်ရှင်ကိုငြင်းပယ်၍ ငရဲမီးအိုင်ထဲ၌ အသက်တာကို ထာ၀ရပျက်စီမလား။
“မယုံကြည်သောသူမူကား အပြစ်စီရင်ခြင်းခံရလတံ့။ (ရှင်မာကု ၁၆း၁၆)။
အကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းခြင်း၌ မြောက်များစွာသောလူများကို ငရဲမီးအိုင်ထဲ၌ မပျက်စီးစေလိုပါ။ ယနေ့ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ ဒေသန္တရအသင်းတော်သို့ လာပါ။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ လာပါ။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ယေရှုထံ ချဉ်းကပ်ပါ။ ဒေသန္တရအသင်းတော်သို့ လာရောက်ပါ။ သခင်ယေရှု၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် အသွေးတော်အားဖြင့် ထာ၀ရအသက်တာအတွက် ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိပါ။
ယုံကြည်၍ အသက်တာပြောင်းလဲသူတစ်ဦးဖြစ်ပါ။ တရားစကားတော် အားဖြင့် အနည်းငယ်စုထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပါ။ ဤသို့ပြောပါ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ သခင် သင်သည် ကျွန်ုfပ်၏အပြစ်အတွက် အသေခံစတေးခဲ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ သေခြင်းမှ ထမြောက်သောသူဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ရှေ့တော်သို့ တိုးဝင်ပါ၏။ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သင်၏အသက်တာများကို လူအများအား သက်သေခံ ဝေငှသူတစ်ဦးဖြစ်ပါ။ ဤလောက၏အပြစ်ကို ဆောင်သွားသော ဘုရား သခင်၏ သိုးသငယ်ကိုကြည့်ပါ။ (ယောဟန် ၁း၂၉) ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်များကိုဆေးကြောကာ ခရစ်တော်ထံသို့ ချဉ်းကပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် သင့်အား အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရရှိသောသတင်းစကားများ ကျေးဇူးတော်ကို ထပ်လောင်း တည်ရှိပါစေသော်။ အာမင်ဍ
ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်လျှက် သီချင်းနံပါတ်(၇)ဖြစ်သော “ကရာနီကုန်းပေါ်သို့ကျူး”ဟူသော ဓမ္မသီချင်း သီဆိုကြပါစို့။
ကရာနီကုန်ုးပေါ်သွန်းသော သွေးတော်ဖြင့်ဆေးကြောရန် ကိုယ်တော်ရှင် မြတ်ထံသို့ ခေါ်သောသံတော် ကျွန်ုပ်ကြားရ ကိုယ်တော်ထံလာသည်၊ ယခုပင်လာပြီ
သွန်းတော်မူသော သွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောစင်ကြယ်စေပါ။
အားနည်းယုတ်ညံ့သော်လည်း ကိုယ်တော်အားကိုးစေပါ ကိုယ်တော် ကျွန်ုပ်ပြစ် ဆေးကြောသည် ဖြူစင်အောင်ပြုပါလေ ကိုယ်တော်ထံ လာသည် ယခုပင်လာပြီ
ယေရှုဘုရား၏ သွန်းတော်မူသောအသွေးတော်ဖြင့် အပြစ်ဆေးကြော စင်ကြယ် လိုသောသူရှိလျှင် အနောက်ဘက်ဆွေးနွေးခန်းဘက်သို့ သွားကြပါ။ ဒေါက်တာကေကန် က ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပေးပါမည်။ ဒေါက်တာချန် ကျေးဇူးပြု၍ ထိုဆွေးနွေးခန်းသ်ို့ သွားလိုသောသူတို့အဖို့ ဆုတောင်းပေးပါ။
-	တရားဒေသနာမတိုင်ခင်၊ အေဘေလ်ပရုန်းမုန်းမှ ဟေရှာယ ၅၂း၁၃၊ ၅၃း၁ ကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
- တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်ဖ်မှ် (၁၉၁၄-၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ အီရာစတန်ဖီလ် ရေးသားသီကုံးရေးသားသော “ ဆူးရစ်သရဖူ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။
“ငါတို့ဟောပြောသော သတင်းစကားကို အဘယ်သူယုံသနည်း၊ ထာ၀ရဘုရား၏ လက်တော်သည် အဘယ်သူအား ထင်ရှားတော်မူ သနည်း။” (ဟေရှာယ ၅၃း၁)
(ဟေရှာယ ၅၂း၁၄၊ ၁၃)
၁။	ပထမ၊ လောက၌ ခရစ်တော် သက်ရှိထင်ရှားစဉ်တွင် အနည်းငယ်သာယုံကြည်ပြီး အသက်တာပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ယောဟန် ၁၁း၃၉၊ ၄၃-၄၄၊ ၄၇၊ ၅၃၊ ၁၂း၃၇-၃၈ ရှင်မဿဲ ၉း၃၅
၂။	ဒုတိယ၊ တမန်တော်အချိန်အခါတွင် လူအနည်းငယ်သာ ယုံကြည်ပြောင်းလဲ ခဲ့ကြသည်။ ရောမ ၁ဝး၁၁-၁၆
၃။	တတိယ၊ ယနေ့ခေတ်တွင် လူအနည်းစုသာ ယုံကြည်ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။
ရှင်မဿဲ ၇း၁၃-၁၄၊ ရှင်မာကု ၁၆း၁၅၊ ၁၆၊ ယောဟန် ၁း၂၉